Izindaba - Ungaligcina kanjani ikhanda lephrinta ngokunengqondo?
Njengengxenye eyinhloko yomshini wokuphrinta we-inkjet, ukuzinza kwekhanda lokuphrinta kunquma ngokungaqondile ikhwalithi yomshini. Lapho izindleko ezingaguquki zekhanda lokuphrinta liphezulu kakhulu, ungayandisa kanjani impilo yesevisi yekhanda lokuphrinta, unciphise izindleko zokufaka esikhundleni nezinga lokugqoka, futhi ugcine ikhanda lokuphrinta kahle. Kubalulekile ezitolo zokukhangisa nakucubungula opharetha! Wonke umuntu akayena umfokazi ukuphrinta amakhanda.
Njengengxenye eyinhloko yomshini wokuphrinta we-inkjet, ukuzinza kwekhanda lokuphrinta kunquma ngokungaqondile ikhwalithi yomshini. Lapho izindleko ezihleliwe zekhanda lokuphrinta ziphakeme kakhulu, ungayelula kanjani impilo yesevisi yekhanda lokuphrinta, unciphise izindleko zokufaka esikhundleni nezinga lokugqoka, Ukugcinwa okunengqondo kwemibhobho yomshini wokuphrinta we-inkjet kubaluleke kakhulu ezitolo zokukhangisa nakwezokusebenza kwabasebenza!
Uyinki womshini wokuphrinta we-inkjet
Uyinki nombhobho yizici ezimbili ezibalulekile zokuphrinta okujwayelekile komshini wokuphrinta we-inkjet nokukhipha okuzinzile kwesithombe. Laba bobabili bayasebenzisana futhi babalulekile. Ngakho-ke, ukugcina umbhobho usesimweni sokuphrinta esihle kakhulu, kunezidingo ezithile zekhwalithi ye-inki nendlela yokusebenza yomshini wokuphrinta we-inkjet.
Ukuvinjelwa kokuxubana: Kunezinhlobo eziningi zama-inki emakethe, futhi ukwakheka kwe-ink solvent okukhiqizwa yinkampani ngayinye kuhlukile. Ukuxubeka kwezinhlobo ezahlukahlukene namaqoqo ama-inki kuthambekele ekuphendukeni kwamakhemikhali, okungadala ukusakazwa kombala nokulahleka kombala, futhi kubangele imvula ukuvimba umlomo wombhobho, ngakho-ke akuvunyelwe ukuxuba uyinki wangaphakathi nangaphandle noyinki wemikhiqizo ehlukile.
2.Sebenzisa ikhwalithi engaphansi ngokuqapha: Uyinki ophansi akakho ezingeni lokushelela nokuncipha, okuzothinta umphumela wokugcina wokudweba nokuhanjiswa koku-oda. Izinhlayiya ezinkulu ze-pigment zingashisa kalula umlomo futhi zibangele ukugqokwa nokusetshenziswa unomphela, ngakho-ke ungafisi ukushibilika kukayinki ophansi, Ngoba ukulahleka okuncane akukufanele ukulahlekelwa.
3.Khetha okwangempela: Kungcono ukukhetha uyinki wokuqala womkhiqizi womshini wokuphrinta we-inkjet, ohlolwe ngokuyisisekelo ngokuhlolwa nokusetshenziswa kwesikhathi eside. Iyahambisana nenhloko yokuphrinta yomshini wokuphrinta we-inkjet futhi izinzile futhi inokwethenjelwa. Umenzi unikeza isiqinisekiso sesikhathi eside ngemuva kokuthengisa. Kungukukhetha okungcono kakhulu kukayinki womshini wokuphrinta we-inkjet.
Ukusebenza komshini wokuphrinta we-Inkjet
Ukucisha nokuvala uphawu: Ngemuva kokuphothula umsebenzi womshini wokuphrinta we-inkjet, qinisekisa ukuthi ikhanda lokuphrinta kanye nesitaki seyinki kuhlanganiswe ngokuqinile ukuhlukanisa umoya nokuthambisa ngokuphelele ikhanda lokuphrinta ukuvimbela ukuminyana kwekhanda lokuphrinta.
Ukuvikelwa kwamandla 2.Power ngaphambi kokufaka ezinye izingxenye noma ukwenza isondlo kumshini wokuphrinta we-inkjet, khumbula ukuthi umshini wokunyathelisa we-inkjet kufanele ucishwe. Musa ukufaka noma ukuqaqa ngokuthanda kwakho.
Ukususwa kwezinto zangaphandle: Ngaphandle kokudliwa kwephepha, akuvunyelwe ukubeka ezinye izinto zangaphandle kupulatifomu yokuphrinta yomshini wokuphrinta we-inkjet, okuzodala umonakalo kumbhobho ngesikhathi sokunyakaza.
4.Vimbela ugesi ongaguquguquki: Izinto ezisetshenziswa esitolo ngokufanelekile ukugwema ukungqubuzana nokukhiqizwa kukagesi. Umshini kufanele uxhunywe phansi ngaphambi kokusetshenziswa, futhi kufanele kugqokwe amagilavu ​​okuvikela lapho uthinta umbhobho.
5.Isondlo: Uma ikhanda lokuphrinta liphukile, qala ngokuthola ubunzima balo, bese usebenzisa indlela ehambisanayo ukuyixazulula. Kwenze kancane ngesikhathi senqubo yokuhlanza. Musa ukuphoqa umjovo ukuthi udale umonakalo unomphela ekhanda lokuphrinta.
Iphrinta yomshini wemvelo
Ithempelesha nomswakama: naka ithempelesha nomswakama ozungeze umshini wokuphrinta we-inkjet. Izinga lokushisa lingu-15-30 degrees, kanti umswakama uphakathi kuka-40% -60%. Uma imvelo ingahlangabezani nezimfuneko, ungalungisa ama-air conditioners, ama-dehumidifiers, okomisa izinwele nezinye izinto zokusebenza Thuthukisa indawo okusebenza kuyo.
2.Ukuzinza kweVoltage: Kwizinhlobonhlobo zamashabhu wokucubungula imishini emikhulu, kunconywa ukumisa amandla okusimamisa amandla aphezulu ukuqinisekisa ukuphuma kwamandla okuzinzile ngesikhathi somshini wokuphrinta we-inkjet, ukuze umshini wokuphrinta we-inkjet ube kukhiqizwe futhi kwacutshungulwa kahle.
3.Reduce uthuli: Ekwindla, isimo sezulu somile, sinomoya futhi asina mvula, okungadala kalula umoya, isihlabathi nothuli. Ukuvalwa komoya ngaphakathi akukuhle. Uthuli lungena embhobho, ebhodini nasezingxenyeni zephrinta, lubangele ukuphazamiseka kukagesi okumile nokuvala umlomo wombhobho. Ngakho-ke, thatha izinyathelo ezifanele. Izindlela zokuzivikela ziyadingeka kakhulu.
Inkampani ye-Yinghe inikeza izinhlobo ezahlukahlukene zekhanda lephrinta engenisiwe, njenge-Epson, HP, Canon, Muto, Ricoh, Xaar, njll.